सुशान्तको छिमेकीले दिएको बयानले बिश्वभर रहेका फ्यान च कि,त, परे ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /International/सुशान्तको छिमेकीले दिएको बयानले बिश्वभर रहेका फ्यान च कि,त, परे !
बलिउड अभिनेता, सुशान्त, सिंह राजपू,तको नि,धन भएको २ महिना भन्दा बढी भइस,केको छ ,। उनका बारेमा दिनानुदिन नयाँ नयाँ र,हस्य,हरु, बा,हिर आइरहेको छन् ।
बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राज,पुतको आ त्मह त्या प्रक,रण सीzबीआ,इले जाँच z,गरिरहेzको छ ,। सीबिआईले सुशान्तzको बारेमा ,बयान लिएर उन,zको फ्ल्याट,को आवश्यक सामाग्री पनि, ,नियन्त्र,णमा लि,एको छ, । अनुसन्धा,नको लाzगि सी,बीआईले सुशान्तको घर पनि निzगरानीमा ,राखेका छन् ।
सुशान्तको बान्द्रा,स्थित भवनमा बस्ने एक छि,मेकी महिलाले बोलेको कुराले भा,रतीय सञ्चारमाध्यम ,मात्र नभ,एर विदेशी सञ्चारमाध्य,म,मा पनि प्रमुख,ताका साथ स्थान पाएको छ । उनले बताएको कुराले, अनु,,सन्धा,न ग,र्न पक्कै प,नि सजिलो हुने बताइएको छ । छिमेकी महिलाले ,१३ जुनको रातमा *करीब ,*साढे १० ब,जे अन्दाजी १५ मिनेट समयसम्म ,सुशान्तको घरमा भएका सबै लाइ,टहरु बन्द गरिएका ,थिए, त्यहाँ कुनै पार्टी भएको “थिएन् । यसअ,गाडी सु,शान्तकी प्रेमी”का भनिएकी “रिया चक्रवर्तीले सुशान्तको नि,धन ,हुनुभन्दा अघिल्लो, दिन घरमा पार्टी भएको बया,न प्रहरीसामू दिएकी थिइन् ।
समाचार एजेन्सी एएनzआईको अनुसार सुशान्त,को छि,मेकीले रातzको १०:३० देखि १०:४५ सम्म किचेनमा मात्र लाइट थियो । उक्त राzतमा कुनै पार्टी भएको थिएन् । छिमेकीको उक्त कुराले अनुसन्धा,,नले फरकz मोड लिन सzक्ने देखिन्छ । सीबीआ,ईको, टोलीले, सु,,शान्त,को फ्ल्याटमा करीब ६ घन्टासम्म बसेर अनुसन्धान अगाडी बढाइरहेको छ ।
सीबीआ,ईको टोलीले सुशान्तको नि,धन एउटा प्ला,न म*र्ड,र,को रुपमा हेरे,को भार,तीय स,ञ्चा,रमा,ध्य,मले जान,कारी दिए,का छन् ।
यसका साथै, सुशान्तको नि,धन ज , च,क्रव,र्ती र फिल्म, निर्मा,ता महेश भट्ट पनिz निकै चर्चामा आएका छन् । उनीहरु,को ह्वाट्स,एम,मा भएको कुराका,नी पनि सामाजिक सञ्जा,लमा ,भा,इरल ,भएको ,,छ । उनीह,रुबीच २०१८ मा मजबुत सम्ब,न्ध थियो । यसै वर्ष रियाले महेश भट्ट उनको जीवनमा निकै म,हत्त्व, राख्ने बताएकी थि,इन् ।